Kukanda GGC Mavharuvhu
Ndokugadzira GGC Valves
Chitete Tarisa Mavharuvhu
Bellow Rakavharirwa Mavharuvhu
Chii chiri chinangwa chevhavha yekuchengetedza?
Zvishandiso zvakagadziriswa muChemical kana Process kana Petroleum kana Petrochemical maindasitiri ekushandura mbishi kuita zvigadzirwa zvinobatsira kazhinji Fluidic mune zvakasikwa. Mvura inoyerera nepombi kubva pane chimwe chishandiso ichienda pane chimwe uye inogona kugadziriswa kuti ive inopisa, yakatonhora, yasviba, yakanyoroveswa, sanganisa ...
Knife Edge Gate Valve Kushanda uye Mhando
Knife Edge Gedhi Valve Tsananguro: Iyo banga unopinza vharafu kana banga kumucheto gedhi vharuvhu ibasa rinorema basa vharuvhu inoshanda iyo ine viscous mvura. Kana bepa mu ...
Mhando dzekutarisa Mavharuvhu (Asina Kudzorera Valve) NRV
Mhando dzeChechi Mavharuvhu (Asina Kudzorera Valve): - Kune akawanda marudzi emavhavha ekuongorora ane akasiyana masisitimu emuviri. Izvi zvinotevera mamwe marudzi anowanzo shandiswa evhavha mavhavha. 1. Swing Tarisa Valve Mukutarisa cheki vharu ...
Bhuroka uye Bleed Valve Basa
Mhando dzeBlock uye Bleed vharafu Imwechete blocker uye ropa rinobuda ropa.
1. Globe vharuvhu: (Mhando dzevharuvhu) Globe vharuvhu: Inoshanda nekudzosera chiito che disc kana plug. Iyo disc kana plug inoenda kana kure nechigaro nekudaro ichimisa kuyerera kwemvura kana kubvumira kuyerera kuti kuyerere. Dhisiki kana plug zvigaro pamusoro ...
Katatu Kukanganisa Butterfly Valve (TOBV)
Iyo katatu inobvisa butterfly vharuvhu (TOBV) inosanganisa yechokwadi katatu-offset geometry kuti ibudise-yakasimba-chisimbiso. Mhedzisiro yacho yakazara-nzira mbiri zero-levhage shutoff vharafu iyo inoisa bhenji yekutendeka, inodzokororwa kusarudzika kuita. Kubva pakuvambwa kwavo ...
Akafanana Masuwo Mavharuvhu Anonunurwa Kumutengi weTrinidad neTobago
Iyo hombe stock odhiyo yemavharuvhu ebhora akaendeswa kumutengi weSouth Africa muna Chivabvu 20, 2021
2pc Flanged bhora mavharuvhu Mhando Anti-Static Midziyo YeBhora- Stem- Muviri Blow-kunze Uchapupu Stem Pressur ...
Dong'ou maindasitiri nzvimbo, Oubei Town, Yongjia, Zhejiang, China